०७६ मङ्सिर ११ गते बुधबार ई. स. २०१९ नोभेम्बर २७ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य - SamudayikNews
वि.सं. २०७६ मंसिर ११, बुधबार, इ.स. २०१९ नोभेम्बर २७, शकसंवत् १९४१, परिधावी संवत्सर, दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, ने.सं. ११४० थिंलाथ्व, मार्ग शुक्लपक्ष, प्रतिपदा, १९:५३ उप्रान्त द्वितीया, नक्षत्र– अनुराधा, ९:३८ बजेउप्रान्त ज्येष्ठा, योग– सुकर्मा, २०:३६ बजेउप्रान्त धृति, करण– किंस्तुघ्न, ८:२३ बजेदेखि वव, १९:५३ बजेउप्रान्त वालव, आनन्दादिमा सौम्य योग, चन्द्रराशि– वृश्चिक, सूर्योदय– ६:३५ बजे, सूर्यास्त– १७:०७ बजे र दिनमान २६ घडी ० पला।व्रत/पर्व- बारामा गढी–माई मेला प्रारम्भ।
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) –सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि वर्चस्व स्थापना गर्न सकिने दिन छ । साथीभाइ, बन्धुवान्धव र इ’ष्टमित्रबाट राम्रो सहयोग जुटाउन सकिन्छ । अविवाहितहरूमा विपरीतलि’ङ्गीबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ । परिश्रमका माध्यमबाट आम्दानी बढ्ने छ । दिउँसोबाट राज्यभावमा चन्द्रमा जाने भएकाले सामाजिक र सरकारी गतिविधिमा स’क्रिय भइने छ ।
बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) –भाग्यबलमा अभिबृ’द्धि हुनेछ । धार्मिक वा दार्शनिक गतिविधिमा आक’र्षण बढ्नेछ । रोकिएका काम सम्पादन गर्न मद्दत पुग्ने छ । आज भाग्यमा रहेको चन्द्रमा कर्मक्षेत्रमा प्रवेश गर्दैछ, अतः व्यापार गर्नेले बेलुकीपख सोचेजस्तै लाभ लिन सक्नेछन् । लगानीमा रहेको रकम उठाउन गरिएको प्रयास सफल हुनेछ । सामाजिक कामबाट प्रशंसा प्राप्त हुनेछ ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) –परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल पाइने अवसर जुटेको छ । बिहानीपख बौ’द्धिक र प्राज्ञिक क्षमतामा ह्रास आउनेछ । सृजना’त्मक कामबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्नसक्दैन । मानसिक खिन्नता र वैराग्य जाग्नेछ । अल्छी लाग्दो समय हुनेछ । तर दिन ढल्नासाथ आज कुनै बिग्रिनै लागेको काम बन्न सक्छ ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) –बन्दव्यापार र पेसाबाट सन्तुष्टि मिल्ने देखिन्छ । बिहानको चिन्तन र सोचले समग्रमा फाइदा नै हुनेछ । छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ । इष्टमित्रले प्रशंसा गर्नेछन् । तर्क, बहस र वादविवादको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ वा कुनै झैझगडा, किचलो र विवादमा मेलमिलापका लागि अहम् भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेछ । अपराह्नपछि निराशा र वैराग्यका भाव मँ’डा’रिन थाल्नेछन् ।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) –घरपरिवारमा खुसीको वातावरण छाउने छ । बन्धुवान्धव र छर–छिमेकीले सहयोग पुर्याउने छन् । प्रतिस्पर्धाबाट फाइदा उठाउन सकिने छ । वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ लिने मौका छ । इष्टमित्र र नातेदारका माझमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ । बेलुकीपख दार्शनिक र आध्यात्मिक विषयवस्तुको आक’र्षण बढ्ने देखिन्छ । लेखन, प्रकाशन र ज्ञानगुनका क्षेत्रमा सक्रियता बढ्ने छ ।
बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) –बिहान सामाजिक र परोपकारका क्षेत्रमा ख’ट्दा मनमा आनन्दको अनुभूति हुनेछ । दिउँसोबाट पारिवारिक र घरायसी प्रयोजनमा समय दिइने छ । खर्च बढे पनि घरायसी सुखसुविधाका सामाग्रीको जोहो हुनेछ । बन्दव्यापारमा लाभै हुनेछ । प्रेमसम्बन्धमा सुधार आउने छ । बेलुका घरायसी समस्याहरू देखापर्न सक्छन् । पतिपत्नी वा प्रेमी/प्रेमिकाका बीचमा मनोमा’लिन्य हुनसक्छ ।
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) –ब’न्द व्यापार र कृषिक्षेत्रमा मध्यम छ । धनागमका दृष्टिले आजको दिन सामान्यतया ठिकैको दिन रहने छ, तर व्यवहारिक कठिनाइको सामना गर्नु पर्ला । आहारविहार र खानपानको समय बदलिन सक्छ । मानप्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादाप्रति सचेत रहनु होला, बोलीमा खासै प्र’भाव रहने छैन । तपाईंको भावनाको कदर नहुनसक्छ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) –परोपकारका क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने छ । आफ्नो निर्णयमा गरिएका कामबाट बेफाइदा हुनेछैन । बन्दव्यापारमा फाइदा नै देखिन्छ । मनमा देखिएका निराशा र खिन्नताको समाप्ति हुनेछ । दुः’खसु’ख, आयव्यय, सफलता–असफलता उस्तैउस्तै होला । सोचे अनुसार विभिन्न ठाउँको यात्रा पनि हुनसक्छ । नयाँ व्यापार वा व्यवसायतर्फ मन आकर्षित हुनेछ ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) –पशुपालन र कृषिव्यवसायमा सफलता प्राप्ति हुनेछ । तर्क, वहस र वा दवि वा दमा विजय प्राप्त हुनेछ । धार्मिक गतिविधि, दर्शन र अध्यात्मतर्फ लाग्न प्रेरणा प्राप्त हुनेछ । चि’न्त’नमू’लक काममा स’क्रियता बढ्ने छ । कुनै सरकारी काम भए दिनभरिमा सि’ध्या’उनु राम्रो हुन्छ । अपराह्नपछि द्वादश चन्द्र हुनाले पेसा वा ब’न्दव्यापारमा ध्या’नकेन्द्रित हुँदैन ।
Prevदक्षिण कोरियामा एक नेपाली युवा अमिन राईको मृ’त्यु ! मि’र्त्यु हुनु भन्दा अघि फेसबुकमा राखेको थिए यस्तो स्टेट्स(स्टेट्स सहित)
Nextनातिनी जस्ती युवतीसंग बिहे गरेका हजुरबुवा भन्छन् : ‘एकअर्का बिना बाच्न सक्दैनौँ’ (भिडियो)